नाटकीय दुई घटनाक्रम : पुर्वसभामुख महरा रिहा, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे मन्त्री ! - Himali Patrika
नाटकीय दुई घटनाक्रम : पुर्वसभामुख महरा रिहा, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे मन्त्री !
हिमाली पत्रिका ५ फाल्गुन २०७६, 11:34 am
काठमाडौँ — सोमबार नाटकीय रुपमा दुई घटनाक्रम विकसित भए । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध ज’र्ब’जस्ती क’रणी’सम्बन्धी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको मु’द्दामा फैसला आयो ।
आइतबार नै महराविरुद्धको अन्तिम सुनुवाइ सकिएको थियो र त्यसै दिन फैसला आउने अनुमान थियो। तर, अन्तिम समयमा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर कार्कीले सुनुवाइ सकिए पनि मु’द्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको जानकारी दिएका थिए।
त्यही मुद्दामा अदालतले सोमबार महरालाई सफाई दियो। र, उनी रिहा भए। जिल्ला अदालतले महराविरुद्ध अभियोग दाबी न’पुग्ने भन्दै सफाइ दिएको छ।
सोमबार नै तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे मन्त्री भइन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेकी तुम्बाहाङ्फेले सोमबार नै सपथ लिइन्। सभामुखमा दावी गरे पनि अन्तिम समयमा पार्टी निर्देशनपछि राजीनामा गरेकी तुम्बाहाङ्फेलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री बनाउने आश्वसन दिएका थिए।
त्यसैअनुसार उनलाई मन्त्री बनाइएको हो। तर, मन्त्री बनाउन जुन दिन रोजियो त्योचाहिँ अर्थपूर्ण रहेको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलेको छ।
माथिका दुई घटनाक्रम देख्दा अलगअलग लाग्छन् तर यी एकअर्कासँग जोडिएका छन्। त्यसैले प्रश्न उठेको छ– महरा नि’र्दोष भएर रिहा हुने र तुम्बाहाङ्फे मन्त्री हुनु एउटै दिन पर्नु कस्तो संयोग? यी दुवै घटनालाई नजिकबाट हेरेका नेकपा नेताहरु यसलाई योजनाको रुपमा हेर्छन्। यद्यपि अदालतको फैसलाको विषय भएकाले औपचारिक रुपमा टिप्पणी दिन भने उनीहरु तयार देखिएनन्।
‘महरा रि’हा हुने दिन महिला अधिकारकर्मीहरुले तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख नबनाएको मुद्दा उचालेर सरकारमाथि दबाब बनाउने सम्भावना थियो। त्यसलाई रोक्ने अस्त्रका रुपमा तुम्बाहाम्फेलाई महरा छुट्ने दिन नै मन्त्री बनाइएको हो,’ नेकपाका एक नेताको दाबी छ।
कतिपय महिला अधिकारकर्मी र महिला नेतृ तुम्बाहाम्फेलाई मन्त्री बनाउन लबिइङमा लागेका थिए। तुम्बाहाङ्फेमाथि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीकोसमेत सद्भाव रहेको चर्चा थियो। तुम्बाहाङ्फेले महराको ग’ल्तीमा आफूलाई किन स’जाय दिने भन्दै सभामुख बन्न पाउनु पर्ने अडान लिएकी थिइन्।